इन्जिनियर आयो छोरी जोगाउनुपर्छ ! - Engineers Post
ई. नरेन्द्र सिंह भण्डारीMay 12, 2021
विभिन्न पेशाहरुमध्ये एक प्रतिष्ठित पेशा हो इन्जिनियरिङ । रहेक बुवा–आमाको सपना आफ्नो सन्तानलाई इन्जिनियर बनाउने हुन्छ । गर्भमा बच्चा हुँदादेखिको त्यो सपना बच्चा जन्मिएपछि अशिर्वादमा बदलिन्छ । भन्ने गरिन्छ, ‘ठूलो मान्छे बनेस्, इन्जिनियर बनेस् ।’
इन्जिनियरको विषयमा एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘डाक्टरले गल्ती गर्दा एक जनाको ज्यान जान्छ तर, इन्जिनियरले गल्ती गर्दा हजारौंको ज्यान जान सक्छ ।’ इन्जिनियरको काम घर, भवन, पूर्वाधार निर्माण या भनौँ हरेक संरचनासँग जोडिने हुनाले पनि यसो भनिएको हो । जुन कुरा विभिन्न घटनाक्रमले पनि पुष्ट गर्दै आइरहेको छ ।
तर, पछिल्ला दिनहरुमा इन्जिनियरलाई लिएर विभिन्न ट्रोलहरु बन्ने गरेका छन् ।
‘एक घर एक इन्जिनियर’, ‘एक घर एक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’ ‘घरको छतबाट ढुंगा फाल्दा एक न एक इन्जिनियरको टाउकोमा लाग्छ’ आदि ।
इन्जिनियरिङ पेशालाई भद्दा मजाक बनाएर खोलिएका ‘इन्जिनियरको चिया पसल’, ‘इन्जिनियरको मासु पसल’, ‘इन्जिनियरको फोटोकपी पसल’ ले इन्जिनियर र इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई बदनाम बनाइरहेका छन् ।
आखिर किन यसरी घटिरहेको छ, इन्जिनियरिङ पेशाप्रतिको सम्मान ?
यसको एउटा कारण, पढाइ पैसा भए हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण पनि हो । छोरा–छोरीको इच्छा आर्टस् पढ्ने छ या कमर्स त्यो नबुझी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न उनीहरुलाई इन्जिनियरिङ पढाउने जमातका कारण यस्तो अवस्था आइरहेको छ ।
विद्यार्थीहरुले पनि नामको अगाडि ई. थप्नकै लागि इन्जिनियरिङप्रति रुचि देखाएका हुन्छन् । उनीहरुको भविष्यको भिजन र मिसन केही हुँदैन, बस् इन्जिनियरिङ पास गर्ने र लाइसेन्स निकाल्ने लिने । चाहे त्यसका लागि ६, ७ या ८ वर्ष नै किन नलागोस् ।
यसरी, रुचिबिना नामको अगाडि ई. लेखेकाहरु कि विदेशमा गएर भाँडा माझिरहेका छन् कि पसल खोलेर नेपालमै बसेका छन् । इन्जिनियरिङ सकेर आफूले सिकेको शिक्षालाई व्यवहारिक जीवनमा उतार्न नसक्नेहरुको जमातको नेपालमा कमी छैन । जसले गर्दा यस पेशाप्रतिको मर्यादा र आकर्षण घटिरहेको छ ।
त्यस्तै, पैसाको लोभमा फाइल बोकेर होटलदेखि ब्यापारी, ठेकेदारको घरसम्म पुग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि इन्जिनियरप्रति समाजमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । छिटो पैसा कमाउने धाउन्नमा गलत काम गरेर आफ्नो र सिंगो इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान, मर्यादाको ख्याल नगर्ने साथीहरुका कारण पनि यस्तो समस्या आइरहेको छ । समाजमा इन्जिनियरको हिजो जुन छवी थियो र बुवा–आमाले जुन सपना बुनेका हुन्थे आज त्यसमा कमी आउनुमा आज यस क्षेत्रले भोग्दै गइरहेको बदनामी पनि एउटा मुख्य कारण हो ।
५ हजार घुससहित फलानो पालिकाको इन्जिनियर समातियो, असार महिनामा अख्तियार इन्जिनियरले भरियोजस्ता समाचार किन आइरहेका छन् ? के यस्ता समाचारले इन्जिनियरको गरिमा बढाउला ?
एक पटक एक जना सिनियर इन्जिनियरले एउटा घटना सुनाउनुभएको थियो । उहाँ कामको अनुगमन गर्न झापा जानुभएको रहेछ । त्यहाँ काम गर्ने एक ठेकेदारले उनलाई अनुगमनपछि नजिकै रहेको एक जमिनदारको घरमा लगेर गएछन् । जमिनदारले ठेकेदारलाई कुर्सी र इन्जिनियरलाई सुकुल बिसाइदिएछन् । ठेकेदारले ‘उहाँ इन्जिनियर साब हो, उहाँलाई कुर्सी दिनुस्’ भन्दा ती जमिनदारले ‘हाम्रो इन्जिनियर भनेको पनि तपाईं नै हो, जे भने पनि तपाईं नै हो । विकास ल्याउने त तपाईं नै हो’ भनेछन् ।
यहाँ कुरा कुर्सी र कुसुलको मा कुरा होइन र कुनै एक ठेकेदार र इन्जिनियरको सम्मानको कुरा पनि होइन । सम्मान सबैले पाउनुपर्छ । तर, हाम्रो समाजले इन्जिनियरलाई कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ठेकेदारले कुर्सी पाउँदा, इन्जिनियरले किन पाएनन् भन्ने हो । यहाँ त अहिले इन्जिनियरहरु ठेकेदारभन्दा पनि बदनाम हुन थालेका छन् ।
कतिपय खराब साथीहरूको व्यवहार र कुनियतले गर्दा हिजो इन्जिनियर आयो छोरी दिनुपर्छ भन्नेहरु आज इन्जिनियर आयो छोरी जोगाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन् । विस्तारै इन्जिनियरिङ पेशाप्रति समाजको मान–सम्मान खस्कदै छ । काममा अविश्वास पैदा हुँदैछ, रक्सी र भाले नखाई, गोजीमा दुई–चार पैसा नराखिदिई इन्जिनियरले बिल पास गर्दैनन् भन्नेहरु हरेक वडा–वडामा भेटिन थालेका छन् ।
इन्जिनियरिङ क्षेत्रको यो हविगत आउनुमा तपाईं–हामी पनि जिम्मेवार छौँ । हामी सबै आफैमा इमानदार हुने हो भने हाम्रो पेशामाथि कसैले औँला उठाउन सक्दैन । अझ दुई–चार जनाले गरेको गलत कामका कारण सिंगो इन्जिनियरिङ समुदायले अपजस पाउनु पक्कै हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो । आउनुस्, सुधार आफैबाट गरौँ ।